Ha noqon Punk, noqo Hunk iyo Chunk Tusmadaada | Martech Zone
Ha noqon Punk, noqo Hunk iyo Chunk Mawduucaaga
Axad, Abriil 22, 2007 Sabti, Febraayo 20, 2016 Douglas Karr
Taasi stunk, raali ahow! Waxaan rajeyneynaa, inay dareenkaaga heshay. Dan Zarrella wuxuu leeyahay boosto aad ufiican oo ku saabsan xoqitaankaaga. Waxaan ku celcelinayaa qaar ka mid ah taladiisa oo aan ku tuurayaa wax yar oo tayda ah.
Waxaa jiray qadar aad u badan oo cilmi baaris ah oo ku saabsan dhaqanka booqdayaasha websaydhka iyo sida ay u akhriyaan una gudbiyaan qodobbada iyo bogagga shabakadda shabakadda. Hab caadi ah oo loogu talagalay booqdayaasha websaydhka ayaa ah inay akhriyaan xogta ama cinwaannada cinwaanka ah dillaac halkii aad ka akhrin lahayd maqaal kor ka hooseeya. Shakhsiyan, waan ku dhibtooday naftayda inaan sidan u qoro, laakiin waxaan sii wadaa isku dayga. Kala soocida qaybo ka mid ah waxyaabaha ku jira cinwaannada laga yaabo inay geesinimo leeyihiin, midabbo duwan yihiin, ama weynaan karaan ayaa u oggolaan doonta martidaada inay si dhakhso leh u eegaan waxa ku jira. Intaa waxaa sii dheer, kala saarida baaragaraafyadaada waxay u saamaxdaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh u baaraan, mararka qaarna ka boodaan furitaanka jumlada ilaa furitaanka jumlada halkii aad ka akhrisan lahayd dhammaan faahfaahinta u dhexeysa
Intaas oo dhan ma heshay?
Waxaa laga yaabaa… malaha maya! Waxaad toos ugu boodday tan faqash. Ku qor qoraaladaada iyo qoraaladaada qaab gaar ah si aad ugu sahlanaato marinka iyo fahamka:
Adeegso Qoraal Geesi ah - wuu taagan yahay, miyaanay ahayn?
Isticmaal Cinwaano - cinwaan hoosaadyada ayaa u oggolaanaya dadka waawayn inay si dhakhso leh u baaraan waxa ku jira.
Adeegso Farqiga Farqiga - kala dheereynta ayaa kala soocaysa waxa ku jira waxayna u oggolaaneysaa martida inay si deg deg ah u akhriyaan jumladaha furitaanka.
Adeegso Liisaska Boodhadhka iyo Lambarada - kani waa mid abaabulan oo si fudud loo akhriyi karo.
Qor 5 ilaa 10 Uun - isku day inaad labadaba xaddiddo oo aad ku ekaato tirada cutubyada (ie guntimaha) waxyaabaha aad ka kooban tahay. Isku-dheellitirnaan ayaa kaa caawin doonta sii-haynta akhristaha maxaa yeelay waxaad dejineysaa waxyaabo laga filayo akhristayaasha.
Kama aanan jarin qeybtii hore ee mowduucan ujeed, oo way muujisay, miyaanay ahayn? Fursadaha ayaa ah inaadan akhrin sadarkaas buuxa.
Maaha kaliya loogu talagalay blogyada!
Waxaan u ahay dambiile sida qof kasta oo kale oo aan wax cunin, laakiin waxaan u sii shaqeyn doonaa si adag. Sidoo kale waa inaad sidoo kale ... ahaataa boggaaga ama balooggaaga, booqdayaashu waxay hayn doonaan wax badan oo ku saabsan boggaaga iyo qodobbadiisa marka loo eego haddii aadan jeexjeexin. Markay wax badan xusuustaan, wax badan bay ku soo laaban doonaan!
Tags: dillaacfahamkajajabintaqaabaynta waxyaabahaiskaanka contentDan Zarrella
Technorati Rank WordPress Plugin Version 2.0.4 Waa la siidaayay
Apr 22, 2007 at 7: 59 PM
Doug, talo weyn, waxaan u adeegsadaa cinwaannada cinwaannada ee mawduucyada u sarreeya maxaa yeelay waan ogaa inay ku yar yihiin waqtiga oo aan go'aan ka gaari karo dhaqso haddii warqadaydu u qalanto waqtigooda